Firenena 5 ambony tokony ho ao anaty lisitry ny siny
Home » Toerana fitsangatsanganana » Firenena 5 ambony tokony ho ao anaty lisitry ny siny
MrGamez dia namoaka laharana vaovao amin'ireo toerana mahafinaritra indrindra eto an-tany ary noporofoin'i Netherlands fa tsy ho ambony amin'ny kolontsaina ihany koa izy fa ny fialamboly koa, raha i Prague kosa no mitana ny lisitr'ireo tanàna.
Miaraka amin'ny sidina mora an'arivony sy hotely mora an'arivony mandeha isan'andro, dia tsy nisokatra ho an'ny fikarohana izao tontolo izao. Saingy amin'ny safidy be dia be, ahoana no hanapahanao hevitra hoe ho aiza?
MrGamez dia nanadihady ireo toerana avo indrindra eran'izao tontolo izao noho ny fialan-tsasatra ary nametraka azy ireo miorina amin'ny metrika 12 toa ny teatra, tranombakoka ary trano filokana maro ary Prague no nivoaka ho tanàna tsara indrindra, raha ny Netherlands kosa dia voatanisa ho firenena ambony indrindra amin'ny fialamboly sy fialamboly.
Inona no mahafinaritra ny toerana?
Ny fikarohana dia nijery anton-javatra isan-karazany, anisan'izany ny tranombakoka maromaro, kianja filalaovana, fety isan-taona ary ny manintona nasionaly. Nikaroka momba ny isan'ny 'lafin-javatra mahafinaritra' tsirairay avy izahay tsirairay avy. Mba hahitsiana ny fampitahana amin'ny toerana itodiana samy hafa habe, ny haben'ny ankapobeny dia novaina tamin'ny isa 'isaky ny km toradroa' talohan'ny nanisana ny laharana farany. '
Miaraka amin'ny traikefa nahafinaritra indrindra, ireo firenena dimy voalohany ireo dia maneho ny toerana tsara indrindra eran'izao tontolo izao amin'ny dia mahafinaritra sy mahafinaritra:
1. The Netherlands - Na dia izy aza no voalohany amin'ny kolontsaina, mirehareha be dia be amin'ny tranombakoka sy efitrano fanaovana fampisehoana i Netherlands.
2. Sipra - Tamin'ny fisarihana nasionaly 188, trano filokana 31 ary tranombakoka 32, tsy noraharahaina i Sipra tamin'ny resaka kolontsaina sy fialamboly.
3. Belzika - Na eo aza ny halehibeny, mitana ny laharana fahatelo i Belzika miaraka amin'ireo zava-manintona nasionaly 295, tranombakoka 50 ary valan-javaboary biby sy rano 45.
4. Royaume-Uni - Avy amin'ny efitrano fampisehoana sy galeriana zavakanto mankany amin'ny trano fisakafoanana ao amin'ny Michelin Star sy ny UNESCO Heritage Heritage Site, misy kolontsaina be dia be hijerena manerana an'i UK.
5. Alemana- Miaraka amin'ny laharana faharoa amin'ny fialamboly, zaridaina momba ny biby sy rano, dia be ny fahafinaretana alatsaka ao anatiny i Alemana.
Mandosira mankany Prague
Miaraka amin'ny efitrano fandosirana 72 - mihoatra ny tanàna hafa rehetra - tena nanaiky ny hafanam-ponenana i Prague. Na dia afaka mirehareha aza ny tanàna toa an'i Londres sy New York, izay manintona maro hafa, ny Prague kosa dia manangona habaka be dia be ho any amin'ny toerana kely, midika izany fa tsy lavitra ny fialamboly sasany ao amin'ny The City of a Hundred Spiers ianao.
Manisaha hatrany amin'ny UNWTO General Assembly, tsy momba an'i Zimbabwe sy Mzembi izany
Ny Watch & Clock Fair lehibe indrindra eto an-tany dia hisokatra ao Hong Kong